अन्तराष्ट्रिय Archives - मधेश प्रदेश डटकम
विश्वबैँकले भन्यो, नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र हुने
काठमाडौं, पुस २८ गते । विश्व बैँकले यस वर्ष नेपालको ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर मात्र हुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैँकले सन् २०२२ को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै नेपालको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान...
सन्तोष साहले जिते मास्टरसेफ प्रोफेसनल्सको ‘रिम्याच’
काठमाडौँ, पुस १३ गते । सिरहाका सेफ सन्तोष साहले बिबिसी मास्टरसेफ प्रोफेसनल्सको ‘रिम्याच’ उपाधि जितेका छन्। सोमबार बेलुका बिबिसी वानमा प्रशारण भएको फाइनलमा नेपाली सेफ साहले अन्य तीन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर उपाधि जितेका हुन् । यसअघिका मास्टरसेफ प्रोफेसनल्स फाइनलिस्टहरूलाई फेरि अवसर दिँदै प्रतिस्पर्धा गराइएको हो। रिम्याचमा सन् २०२० का फाइनलिस्टहरु सन्तोष, फिली आर्मिटेज म्याटिन, बार्ट भ्यान डेर ली र सन् २०१७ का फाइनलिष्ट जेमी पार्क सहभागी थिए ।
जापानमा ८ तल्ले भवनमा आगलागी, २७ जनाको ज्यान गयो
जनकपुरधाम, पुस २ गते । जापानको पश्चिमी क्षेत्रस्थित ओसाका सहरको ८ तले भवनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। जापानको स्थानीय एनएचके ब्रोटकास्टरका अनुसार शुक्रबार ओसाका सहरको ८ तले भवनको चौथो वा पाँचौं तलामा आगलागी भएको हो। सो क्षेत्र पसल तथा मनोरञ्जनस्थलको रुपमा रहँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ। यो आगलागीबाट २८ जना मानिसहरु प्रभावित भएका थिए। जसमध्ये २७ जनालाई मुटु र फोक्सोले काम नगरेको अवस्थामा फेला...
प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाने तयारी, गुजरातमा हुने समिटमा भाग लिने
काठमाडौं, १ पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारत भ्रमणबारे अहिले देउवाको सचिवालयले तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि बेलायत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्ताको क्रममा मोदीले देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको र देउवाले पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीको १४औं महािधवेशनमार्फत पूनः सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।...
ओमिक्रोनको कारण अहिले नै लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छैन : बाइडेन
मंसिर १४ एजेन्सी ।। ओमिक्रोनको कारण अहिले नै लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति नआएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण अहिले नै लकडाउन लगाइहाल्नै पर्ने स्थिति नभएको बताएका छन् । बाइडेनले ओमिक्रोन कोभिड भेरियन्ट चिन्ताको कारण त हो त तनावको कारण नभएको बताएका छन् । यो बयान बाइडेनले उत्तरी अमेरिकामा ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएपछि दिएका हुन् । उनले भने, ‘यदि मानिसहरुले भ्याक्सिन लगाएका छन् र मास्क लगाइरहेकमा...
अमेरिकामा धनुषाका एक नेपालीको गोली दागेर हत्या
जनकपुरधाम, कार्तिक ३ गते । अमेरिकामा व्यवासय गर्दै आएका आएका धनुषाका एक नेपालीको गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ । धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका महेन्द्रनगर घर भएका अन्दाजी ५४ वर्षीय लालकिशोर महासेठको हत्या भएको हो। अमेरिकाको फल रिभरको म्याचुस्टरमा जेनरल स्टोर सञ्चालन गर्दै आइरेहका महासेठको हत्या भएको हो । सोमबार राति उनको पसलमै हत्या भएको मधेशी एसोसिएन अफ अमेरिकाका अध्यक्ष सत्येन्द्र साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार अमेरिकी समयअनुसार राति ९ बजे...
जम्मु–कश्मीरमा सेना र आतंकवादीबीच मुठभेड जारी, २२ जना मारिए
एजेन्सी-कार्तिक १ गते । भारतको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मु–कश्मीरमा गत सोमबारदेखि जारी सेना र आतंकवादी समूहबीचको मुठभेडमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । मारिनेमा भारतीय सेनाका ९ जना छन् । यसैगरी भारतीय सेनाले आतंकवादी समूहका १३ जना जनालाई मारेको दाबी गरेको छ । भारतीय सेनाले गत सोमबार सरनकोटको एक गाउँबाट आतंकवादी समूहविरुद्ध अपरेसन सुरु गरेको थियो। अपरेसनको पहिलो दिनमै सेनाका एकजना जुनियर अफिसरसहित ५ जना मारिएका थिए। सेनाको अभियानको दोस्रो...
अफगानिस्तानमा एक पत्रकारसहित तीनजनाको गोली दागेर हत्या
असोज १८ गते । अफगानिस्तानमा एक पत्रकारसहित तीनजनाको गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ । पूर्वी प्रान्त नान्गार्हारको जलालाबाद शहरमा आफ्ना आफन्तसँग घुमिरहेका पत्रकार सेयद मरोफ शादातको गोली प्रहार गरि हत्या भएको हो । अज्ञात समूहले पत्रकार शादातलाई लक्षित गरि गरिएको गोलि प्रहारबाट उनीसहित तीनजना मारिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । गोली प्रहारबाट शादातका छोरा र गाडीका चालक घाइते भएका छन्। स्वतन्त्र अफगान मिडिया समूह अफगान पत्रकार सुरक्षा समिति (एजेएससि) ले...
यूपीमा आन्दोलित किसानहरुमाथि मन्त्रीका छोराले कार कुदाए, ८ जनाको मृत्यु, प्रियंका गान्धीसहितका नेताहरू पक्राउ
एजेन्सी- लखनउ, असोज १८ गते ।भारतीय कांग्रेसकी महासचिव प्रियंका गान्धीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएको छ । आज बिहान उत्तरप्रदेशस्थित सितापुरको हरगाउँबाट गान्धीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीमा जारी किसानहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रहरीले गान्धीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । लखिमपुर खिरीमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा केही किसानहरू मारिएका खबर छ । बीबीसी हिन्दीले विराेध प्रदर्शनका क्रममा ८ जना किसानकाे मृत्यु भएकाे जनाएकाे छ...
तीन वर्षदेखि नजरबन्दमा रहेकी हुवावेकी कार्यकारी प्रमुख वानझाउ रिहा
एजेन्सी, ९ असोज। चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेकी कार्यकारी प्रमुख मेङ वानझाउलाई क्यानडाले तीन वर्षपछि रिहा गरेको छ । अमेरिकाले ठगीको आरोप लगाउँदै पक्राउ गर्न अनुरोध गरेपछि क्यानडाले सन् २०१८ को डिसेम्बरमा वानझाउलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । तर, पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अमेरिकी अदालतले वानझाउलाई रिहा गरेपछि उनी क्यानडाबाट विशेष विमानमार्फत चीन प्रस्थान गरेको जनाइएको छ । अमेरिकाको आग्रहमा हुवावेकी कार्यकारीलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरेपछि रुष्ट बनेको चीनले...
एजेन्सी, असोज ९ गते । विश्वका नेताहरूले प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्व र आ-आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछन् । प्रत्येक वर्ष यस्ता केही आवाजहरू हाबी हुने गर्दछन् र विश्व राजनीतिक मञ्चमा तरङ्ग समेत पैदा गर्दछन् । त्यहाँ एसोसिएटेड प्रेसले केही फरक आवाज र दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरेको छ। कोरोना महामारीको लामो सङ्कटले गुज्रिरहेको विश्वको वर्तमान अवस्थामा महासभाको चौथो दिन शनिबार विभिन्न देशका नेतृत्व तहबाट यस्ता अभिव्यक्त...
मन्त्री यादवको राजीनामा माग, गौर नरसंहारका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न जनमत पार्टीको माग
मन्त्री यादवले दिइन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की
सीके राउतलाई धम्की दिएकी मन्त्री रेणुका कारण उपेन्द्रलाई धक्का
पत्रकार कुटपिट प्रकरण : मेयर साह अदालतमा हाजिर
सिके राउतको हत्या गर्ने हिंसात्मक अभिव्यक्तिपछि जसपा नेतृ रेणु यादवको मन्त्री पद धरापमा
सर्लाहीमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको दोहन
मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमाले र लोसपाबीच गठबन्धन घोषणा
सर्लाहीमा नायक फिल्मको जस्तै १६ वर्षीया बालिकालाई बनाइयो एकदिनको गाउँपालिका अध्यक्ष
वाग्मती नदीमा पुल बन्ने भएपछि रौतहट र सर्लाहीवासी खुसी
© 2022 मधेश मिडिया प्रा. लि. -All rights reserved.